21-day countdown to “Myanmar Internet Blackout Day 101” — အငျတာနကျရရှိရေးကို အလေးထားသော လူပုဂ်ဂိုလျအားလုံးသို့ အိတျဖှငျ့ပေးစာ – Free Expression Myanmar
Sep 09, 2019 by Coordinator	in Campaigns စညျးရုံးလှုံ့ဆျောရေး
Today kickstarts the 21-day countdown to Myanmar Internet Blackout Day 101 on 30 September to show solidarity with over 600,000 people in Rakhine who have had no access to the internet for 101 days!
Can you imagine that 30 September will be the 101st day since the government shut down the internet for hundreds of thousands of people in Myanmar? Could you survive for over three months without mobile data?
That’s why on Myanmar Internet Blackout Day 101, 30 September, we urge everyone to turn off their mobile data, turn off their wifi, put an out-of-office message on email, and close Facebook, and see what it feels like.
Why are we organising Myanmar Internet Blackout Day 101?
On 20 June, the government issued an unprecedented order to all mobile phone operators in Myanmar – MPT, Mytel, Ooredoo and Telenor - to imposeashutdown of the mobile internet in these townships, using the Article 77 of the 2013 Telecommunications Law for the first time.
The order resulted in the shutdown of mobile internet access since 10:00 PM on 21 June in eight townships in Rakhine (Ponnagyun, Rathedaung, Mrauk-U, Kyauktaw, Minbya, Myebon, Maungdaw, and Buthidaung) as well as Paletwa Township in Chin State, affecting overamillion people.
On the night of 31 August, the government lifted the restriction in five townships, but the complete shutdown still remains in four townships - Ponnagyun, Mrauk-U, Kyauktaw, and Minbya .
Although access to the internet has only recently arrived in rural Myanmar through mobile phones, it has become widely used in daily life foravariety of purposes including health, education, employment, agriculture and all forms of business, and the sharing of information and news. Internet shutdowns, even during normal circumstances, therefore impacts significantly onanumber of human rights, including safety, livelihood, health, education, family life, information and freedom of expression.
In conflict areas such as northern and central Rakhine State,an internet shutdown has even more serious consequences for safety. Local residents need access to the internet to obtain help, emergency services and humanitarian aid, to facilitating contact between displaced families, and to share information about the situation on the ground.
How to take part in Myanmar Internet Blackout Day 101
Whether you are based in Myanmar or overseas, we would like to encourage you to show solidarity with over 600,000 people in Mrauk U, Minbya, Kyauktaw and Ponnagyun townships by participating in Myanmar Internet Blackout Day 101 on 30th September. We ask you to:
Between now and 29 September
Discuss with your colleagues how you make use of the internet onadaily basis for your organisation or business.
Agree with them and your managers whether or not you, or your whole organisation, could exist without data foraday.
On 25/26 September
If you plan to turn off your data, you may want to advise key contacts in advance during working hours so that they can, if necessary, send you information before 30 September.
set up an email “auto-response” message to run between 00.00 and 23.59 on 30 September by copying and pasting the following message in your email’s auto-respond box –
“On 30 September, I am participating in Myanmar Internet Blackout Day 101 to show solidarity with over 600,000 people in Rakhine States who have gone for 101 days without access to the internet, on the orders of the Myanmar government. As part of this campaign, I will turn off data on my mobile phone and internet for 24 hours. In case of urgency, please call my phone or send me an SMS.”
Switch the profile on your Facebook to the image for Myanmar Internet Blackout Day 101, and/or putamessage on your website or on the door to your office. The folder with the graphics can be accessed at this link
At 00.00 on 30 September (or the night before)
Switch off for 24 hours between 00.00 and 23.59 on 30th September (mobile data of your phone your organisation’s internet/wifi)
Record the impact this interruption to the internet is having to your daily life.
Between 1st and 3rd October
Provide feedback on your experience of living without internet for 24 hours by email to mdrf@digitalrightsmm.info. Please list the social, economic, professional and other impacts, putting an economic value to them if this is relevant, e.g. business opportunities foregone. Please state in your email whether we can use this information in follow-up publicity and whether your name can be used.
Although Article 77 refers to ‘temporary’ suspension, the order on 21 June was open-ended, did not explain the public interest reason for the shutdown, and has now been in place for over two months for four of the townships without any indication of when it will be lifted. The other five townships were restored online on 1 September after over two months in data darkness.
Those affected in the original nine townships, including their elected representatives, have tried to draw the Government’s attention to the impact which network shutdown is having on their daily lives. For example, access to mobile money services for remittances from overseas family members is blocked, small businesses, such as traders, are unable to conduct business easily, and information has been cut off for those seeking work or education. As services – including e-government – go further on line, those who are denied access to the internet will be further discriminated against, increasing inequality.
Our four organisations, Free Expression Myanmar (FEM), Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB), Myan ICT for Development Organisation (MIDO) and Phandeeyar have worked together over the last three years to organise three Myanmar Digital Rights Forums in 2016, 2018, and 2019. These forums have brought together business, government, and civil society organisations to discuss how Myanmar’s transition to the “4th Industrial revolution” can be achieved in ways which protect, respect and enhance the enjoyment of human rights.
Participants at the Myanmar Digital Rights Forums – and globally including through the UN – have consistently stressed the importance of universal access to the internet asafundamental enabler ofawide range of human rights. For this reason, our four organisations, together with other local organisations issuedajoint statement on internet shutdown in English and Myanmar on 24th June calling for all restrictions on internet access to be immediately and review of the telecommunications law to ensure not to restrict internet access anywhere in Myanmar in future.
We are concerned that the government's order under Article 77 has setaprecedent for further shutdowns in situations where the government identifies so-called ‘instability’. But this is something which should concern all internet users, even if they are not directly affected by the current ban.
What if you are sympathetic but unable to participate?
Even if you feel the impact of cutting off the internet for 24 hours would be too significant for your company, livelihood, safety, or essential services you provide to others, you can still participate.
Please send an email to mdrf@digitalrightsmm.info before 3rd October listing why continued daily access to the internet is essential to you, and why you were therefore unable to join the blackout.
We want the results of this campaign to raise awareness and understanding about the impacts of internet shutdown. We will use them in advocacy to the Government and other stakeholders to lift the current restrictions and refrain from restricting internet access in the future, in any part of the country.
Thank you very much for your support for getting the people of Northern Rakhine back online.
ဇှနျလ ၂၁ ရကျကတညျးက အငျတာနကျပိတျပငျမှုကို ကွုံတှခေံ့စားနကွေရသော ရခိုငျပွညျနယျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျတို့ရှိ မွို့နယျ (၉) မွို့နယျတှငျ နထေိုငျလကျြရှိသညျ့ လူဦးရတေဈသနျးနှငျ့ တဈပေါငျး တဈစညျးတညျး ညီညှတျကွောငျး ပွသမညျ့ အငျတာနကျ ဖွတျတောကျမှု ၁၀၁ ရကျမွောကျနေ့ (Day 101 Internet Blackout Day) လှုပျရှားမှုတှငျ ပါဝငျရနျ အမြားပွညျသူအား ဖိတျချေါလိုသညျ့အတှကျ ကြှနျုပျတို့အနဖွေငျ့ ယခုအိတျဖှငျ့ပေးစာကို ရေးသား လိုကျခွငျး ဖွဈပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံအစိုးရက လူထောငျပေါငျးကို အငျတာနကျဖွတျတောကျထားခွငျးသညျမှာ လာမညျ့စကျတငျဘာလ ၃၀ ရကျနဆေို့လြှငျ ၁၀၁ ရကျမွောကျနပွေီဖွဈကွောငျး သငျ သတိထားမိရဲ့လား။ ဖုနျးအငျတာနကျမရှိပဲ သုံးလကြျော သငျ ရှငျသနျနိုငျသလား။
ထိုကွောငျ့ မွနျမာအငျတာနကျဖွတျတောကျမှူ ၁၀၁ ရကျမွောကျနဖွေ့ဈသညျ့ စကျတငျဘာ (၃၀) ရကျနတှေ့ငျ မိတျဆှတေို့၏ ဖုနျးအငျတာနကျမြား ပိတျပေးရနျ ၊ ဆကျသှယျမှူကှနျရကျ(ဝိုငျဖိုငျ)မြား ပိတျပေးရနျ ၊ရုံးမြားတှငျ ဆကျသှယျမှူဖွတျတောကျထားသညျ့အကွောငျး အီးမေးလျမြားအျောတို ပွနျပေးရနျ၊ နှငျ့ ဖစျေ့ဘှတျမြား ပိတျပေးပွီး၊ ယငျးအခွအေနကွေောငျ့ သငျတို့ မညျသို့မညျပုံသကျရောကျခံစားရကွောငျး စမျးကွညျ့ပါဟု ကြှနျုပျတို့မှ အားလုံးကို တိုကျတှနျးလိုကျပါသညျ။
မွနျမာအငျတာနကျ ဖွတျတောကျမှူ ၁၀၁ ရကျမွောကျနလှေု့ပျရှားမှုကို ကြှနျုပျတို့ ဘာကွောငျ့ ပွုလုပျရပါ သလဲ။
ဇှနျလ ၂၀ ရကျနတှေ့ငျ အစိုးရက ၂၀၁၃ ခုနှဈ ဆကျသှယျရေးဥပဒပေါ ပုဒျမ ၇၇ ကို ပထမဆုံးအကွိမျ အသုံးပွု၍ မွနျမာနိုငျငံရှိ မိုဘိုငျးဖုနျးဆကျသှယျရေးလုပျငနျးမြားဖွဈသညျ့ MPT၊ Mytel၊ Ooredoo နှငျ့ Telenor တို့အား အောကျပါမွို့နယျမြားတှငျ အငျတာနကျဆကျသှယျမှုဖွတျတောကျရနျ အမိနျ့တဈရပျကို ခမြှတျခဲ့သညျ။ အဆိုပါ အမိနျ့အရ ဇှနျလ ၂၁ ရကျနေ့၊ ည ၁၀ နာရီမှစ၍ ရခိုငျပွညျနယျရှိ မွို့နယျ (၈) မွို့နယျ (ပုဏ်ဍားကြှနျး၊ ရသတေ့ောငျ၊ မွောကျဦး၊ ကြောကျတျော၊ မငျးပွား၊ မွပေုံ၊ မောငျးတော၊ ဘူးသီးတောငျ) နှငျ့ ခငျြးပွညျနယျရှိ ပလကျဝမွို့နယျမြားတှငျ လူဦးရတေဈသနျးကြျောသညျ အငျတာနကျဆကျသှယျမှု ဖွတျတောကျခံရမှုကို ကွုံတှခေံ့စားနကွေရသညျ။
သွဂုတျလ ၃၁ရကျနေ့ ညပိုငျးတှငျ အစိုးရက အငျတာနကျဖွတျတောကျထားခွငျး ခံရသော နယျမွမြေားထဲမှ ၅မွို့နယျကို အငျတာနကျဝနျဆောငျမှု ပွနျလညျပေးခဲ့ပွီးဖွဈသျောလညျး ပုဏ်ဏားကြှနျး၊ မွောကျဦး၊ ကြောကျတျော နှငျ့ မငျးပွား စသညျ့ မွို့နယျ လေးခုတှငျမူ အငျတာနကျဖွတျတောကျခံထားရဆဲ ဖွဈသညျ။
အမြားပွညျသူတို့ သိရှိမညျဖွဈသညျ့အတိုငျး အငျတာနကျသုံးစှဲမှုသညျ မိုဘိုငျးဖုနျးမြားမှတဈဆငျ့ မွနျမာနိုငျငံရှိ ကြေးလကျဒသေမြားသို့ ရောကျရှိလာခဲ့သညျမှာ မကွာမွငျ့သေးသျောလညျး အငျတာနကျကို ရညျရှယျခကျြအမြိုးမြိုးဖွဈသော ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေး၊ အလုပျအကိုငျ၊ စိုကျပြိုးရေးအပါအဝငျ စီးပှားရေးအမြိုးအစားအားလုံးနှငျ့ သတငျးအခကျြအလကျ မြှဝမှေုတို့အတှကျ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ အသုံးပွုလာကွကွောငျး တှရှေိ့ရသညျ။ အငျတာနကျဖွတျတောကျမှုသညျ သာမနျအခွအေနတှေငျပငျ လူ့အခှငျ့အရေးမြားဖွဈသညျ့ လုံခွုံမှု၊ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးမှု၊ ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေး၊ မိသားစုဘဝ၊ သတငျးအခကျြအလကျနှငျ့ လှတျလပျစှာ ထုတျဖျောရေးသားပွောဆိုခှငျ့တို့ကို ကွီးမားစှာ ဆိုးကြိုးသကျရောကျမှုရှိပါသညျ။
လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခဖွဈပှားရာ ဒသေမြားဖွဈသညျ့ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးနှငျ့ အလယျပိုငျးတို့တှငျ အငျတာနကျဖွတျတောကျခွငျးသညျ ဒသေခံပွညျသူလူထု၏ လုံခွုံရေးအတှကျ လှနျစှာစိုးရိမျရဖှယျ ကိစ်စတဈရပျဖွဈပါသညျ။ ဒသေခံပွညျသူမြားသညျ လိုအပျသညျ့ အကူအညီမြား၊ အရေးပျေါဝနျဆောငျမှုနှငျ့ လူသားခွငျးစာနာသညျ့ အထောကျအပံ့မြား ပို့ဆောငျနိုငျရေးနှငျ့ စဈပွေးရှောငျနှငျ့ ရှပွေ့ောငျးမိသားစုမြားအခငျြးခငျြး ဆကျသှယျနိုငျမှုရရှိရေးအပွငျ မွပွေငျအခွအေနအေား မြှဝမှေုတို့အတှကျ အငျတာနကျရယူသုံးစှဲနိုငျရနျ လိုအပျသညျ။
အမြားပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ မိမိ၏ စိုးရိမျမှုကို ပွသရနျ မညျသို့ဆောငျရှကျနိုငျသနညျး။
သငျသညျ မွနျမာနိုငျငံတှငျ နထေိုငျသညျဖွဈစေ၊ နိုငျငံရပျခွားတှငျ နထေိုငျသညျဖွဈစေ မွို့နယျ(၉)ခုရှိ ပွညျသူလူထုအပျေါ စာနာကွောငျးနှငျ့ စညျးလုံးမှုရှိကွောငျး ပွသနိုငျရနျအတှကျ စကျတငျဘာလ ၃၀ ရကျနတှေ့ငျ ကရြောကျမညျ့ အငျတာနကျ ဖွတျတောကျမှု ၁၀၁ ရကျမွောကျနေ့ (Day 101 Internet Blackout Day ) လှုပျရှားမှုတှငျ ပါဝငျရနျ တိုကျတှနျးလိုပါသညျ။ လှုပျရှားမှုတှငျ ပါဝနျရနျ သငျ့အား ကြှနျုပျတို့ တောငျးဆိုလိုသညျ့အခကျြမြားမှာ-
ယနနှေ့ငျ့ စကျတငျဘာလ ၂၉ ရကျကွားတှငျ
၁။ သငျ၏ အဖှဲ့အစညျး သို့မဟုတျ စီးပှားရေးလုပျငနျးအတှကျ အငျတာနကျကို မညျသို့အသုံးခကြွောငျး လုပျငနျးခှငျရှိ သငျ၏ လုပျဖျောကိုငျဖကျမြားနှငျ့ ဆှေးနှေးမှုပွုပါ။
၂။ သငျ့အနဖွေငျ့ သျောလညျးကောငျး၊ အဖှဲ့အစညျးတဈခုလုံးအနဖွေငျ့သျောလညျးကောငျး အငျတာနကျကို တဈရကျတိတိ အသုံးမပွုပဲ နနေိုငျခွငျး ရှိ၊ မရှိ ကို မနျနဂြောမြားနှငျ့ ဆှေးနှေးပွီး သဘောတူညီခကျြ ရယူပေးပါ။
စကျတငျဘာလ ၂၅ ရကျနှငျ့ ၂၆ ရကျနမြေ့ားတှငျ
၁။ သငျအနဖွေငျ့ အကယျ၍ အငျတာနကျကို အသုံးမပွုဟု ဆုံးဖွတျထားပါက သငျ အလုပျခြိနျ အတှငျး အဓိကဆကျသှယျလရှေိ့သူမြားကို ကွိုတငျအသိပေးထားမှသာ ၎င်းငျးတို့အနဖွေငျ့ လိုအပျပါက ၎င်းငျးတို့ သငျ့အား ပေးပို့ဆကျသှယျစရာရှိသညျ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို စကျတငျဘာလ ၃၀ ရကျနမေ့တိုငျမီ ပေးပို့ထားနိုငျမညျဖွဈသညျ။
စကျတငျဘာလ ၂၉ ရကျနတှေ့ငျ
၁။ အီးမေးလျတှငျ “အလိုအလြောကျပွနျဖွပေေးသညျ့ မကျဆခြေျ့ (auto-response)” ကို အောကျဖျောပွပါ စာပိုဒျအား ကူးယူဖျောပွပွီး စကျတငျဘာ ၃၀ ရကျနေ့၊ အခြိနျအားဖွငျ့ ဝဝးဝဝ နာရီမှ ၂၃း၅၉ နာရီ အတှငျး ထိုစာပိုဒျကို အလိုအလြောကျ ပွနျဖွပေေးနိုငျရနျ စီစဉျထားရှိပါ။
“စကျတငျဘာလ ၃၀ ရကျနတှေ့ငျ ကြှနျုပျသညျ မွနျမာအစိုးရ၏ အမိနျ့ကွညောခကျြမြားကွောငျ့ ရကျပေါငျး (၁၀၁) ရကျမွောကျနအေ့ထိ အငျတာနကျရယူသုံးစှဲခှငျ့ မရရှိသော ရခိုငျပွညျနယျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျတို့ရှိ လူဦးရတေဈသနျးကြျောနှငျ့ စညျးလုံးမှုရှိကွောငျး ပွသလိုသဖွငျ့ မွနျမာအငျတာနကျဖွတျတောကျမှုနေ့ (Myanmar Internet Blackout Day ) လှုပျရှားမှုတှငျ ပါဝငျလှုပျရှား နပေါသညျ။
ဤလှုပျရှားမှု ကြှနျုပျသညျ မိုဘိုငျးလျအငျတာနကျနှငျ့ အငျတာနကျကို ၂၄ နာရီတိတိ ပိတျထားမညျဖွဈသညျ။ အရေးပျေါလိုအပျပါက ဖုနျးဆကျ၍ သျောလညျးကောငျး၊ ဖုနျးမကျဆခြေျ့ပို့ ၍သျောလညျးကောငျး ကြှနျုပျအား ဆကျသှယျနိုငျသညျ။”
၂။ သငျ၏ Facebook ပရိုဖိုငျပုံကို အငျတာနကျ ဖွတျတောကျမှု ၁၀၁ ရကျမွောကျနေ့ (101th Day of Myanmar Internet Blackout) ဆိုငျရာ ပုံသို့ ပွောငျးလဲခွငျးနှငျ့/သို့မဟုတျ ဝကျဘျဆိုဒျတှငျ ပွောငျးလဲခွငျး သို့မဟုတျ ရုံးတံခါးအဝငျဝတှငျ ကပျထားခွငျးကို ပွုလုပျပေးပါ။ (ပုံမြားကို ယခုလငျ့ချ တှငျ ရယူနိုငျပါသညျ။)
စကျတငျဘာလ ၃၀ ရကျနေ့ မနကျ ဝဝးဝဝ နာရီ (သို့မဟုတျ မတိုငျခငျညတှငျ)
၃။ စကျတငျဘာ ၃၀ ရကျနေ့၊ အခြိနျအားဖွငျ့ ဝဝးဝဝ နာရီမှ ၂၃း၅၉ နာရီ အတှငျး - အငျတာနကျ ပိတျရနျ
(ခ) လုပျငနျးအငျတာနကျ/ wifi တို့ကို ၂၄ နာရီတိတိ ပိတျထားပေးပါ။
၄။ ထိုသို့ အငျတာနကျ အသုံးမပွုပဲ နလေိုကျရခွငျးသညျ သငျ၏ တဈနတေ့ာကို မညျသို့သကျရောကျ မှုရှိကွောငျး မှတျတမျးတငျထားပေးပါ။
အောကျတိုဘာလ ၁ ရကျနမှေ့ ၃ ရကျအတှငျး
၁။ ၂၄ နာရီကွာ အငျတာနကျမရှိဘဲ လုပျကိုငျနထေိုငျရသညျ့အတှကျ ကွုံတှရေ့သညျ့ အတှအေ့ကွုံအား mdrf@digitalrightsmm.info ကိုအီးမေးပေးပို့ပေးပါ။ အငျတာနကျ မရှိသညျ့အတှကျ လူမှုရေး၊ စီးပှားရေး၊ လုပျငနျးခှငျနှငျ့ အခွားဆိုးကြိုးသကျရောကျမှုမြားအပွငျ စီးပှားရေးတနျဖိုးမြားကို လညျး သကျဆိုငျမှုရှိပါက ထညျ့သှငျးဖျောပွပေးပါ)။ ထို့အပွငျ လူကွီးမငျးမှ ပေးပို့သညျ့ အခကျြအလကျမြားကို ကြှနျုပျတို့အနဖွေငျ့ အမြားပွညျသူသို့ ထုတျဖျောတငျပွနိုငျခှငျ့ ရှိ၊ မရှိ နှငျ့ သငျ၏ အမညျနာမကို သုံးစှဲနိုငျခွငျး ရှိ၊ မရှိ ဖျောပွပေးပါ။
အစိုးရ၏ အငျတာနကျဖွတျတောကျမှုက ဘာလဲ။
ပုဒျမ ၇၇ တှငျ ‘ယာယီ’ ဆိုငျးငံ့ခွငျးဟု ဆိုသျောလညျး ဇှနျလ (၂၀) ရကျနကေ့ မိုဖိုငျးဝနျဆောငျမှု ကုမ်ပဏီမြားအား ပေးပို့သော အမိနျ့သညျ အကနျ့အသတျမရှိကွောငျး တှရှေိ့ရသညျ။ ထို့အပွငျ ယငျးသို့ ပိတျပငျမှုအတှကျ အမြားပွညျသူအကြိုးစီးပှားနှငျ့ သကျဆိုငျသညျ့ အကွောငျးပွခကျြမြားကိုလညျး မရှငျးလငျးထားသညျ့အပွငျ မညျသညျ့အခြိနျတှငျ ရုတျသိမျးမညျကို ဖျောပွခွငျးမရှိပဲ ယနအေ့ခြိနျထိ အငျတာနကျဖွတျတောကျမှုမှာ (၂) လကြျော ကွာမွငျ့လကျြရှိကွောငျး တှရှေိ့ရပါသညျ။
အငျတာနကျဖွတျတောကျမှုကို ကွုံတှခေံ့စားနကွေရသော မွို့နယျ (၉) မွို့နယျရှိ ပွညျသူလူထုမြားနှငျ့ ရှေးကောကျခံ ကိုယျစားလှယျမြားကလညျး အငျတာနကျဖွတျတောကျမှုသညျ ၎င်းငျးတို့နစေဉျဘဝအား သကျရောကျနသေညျ့ အခကျြမြားကို အစိုးရက သတိပွုမိနိုငျရနျ ကွိုးစားလကျြရှိသညျ။ ဥပမာ - နိုငျငံရပျခွားမှ ဆှမြေိုးသားခငျြးမြားက မိုဘိုငျးငှကွေေးဝနျဆောငျမှုမြားမှတဈဆငျ့ ငှလှေဲပွောငျးမှုမြား ပိတျပငျခံထားရခွငျး၊ အသေးစားစီးပှားရေးလုပျငနျးမြားနှငျ့ ကုနျသညျမြားအနဖွေငျ့ စီးပှားရေးလုပျရနျ ခကျခဲသှားခွငျးနှငျ့ အလုပျအကိုငျရှာဖှခွေငျးနှငျ့ ပညာရေးရှာမှီးနသေူတို့အတှကျ သတငျးအခကျြ အလကျမြား ပိတျပငျခံရခွငျး စသညျ့ ဆိုးကြိုးမြားကို ကွုံတှခေံ့စားနရေသညျ။ e-government အပါအဝငျ ဝနျဆောငျမှုအမြားစုသညျ အှနျလိုငျးမှတဈဆငျ့ လုပျကိုငျနကွေသဖွငျ့ အငျတာ နကျဖွတျတောကျခံထားရသော ပွညျသူလူထုအပျေါ ခှဲခွားဆကျဆံသလိုဖွဈနသေညျ့အပွငျ မညီမြှမှုကို ပို၍ပငျဖွဈပျေါစပေါတယျ။
ကြှနျုပျတို့အဖှဲ့အစညျးမြားဖွဈသညျ့ လှတျလပျသောထုတျဖျောပွောဆိုခွငျးမွနျမာ (Free Expression Myanmar)၊ မွနျမာ့စီးပှားရေးကဏ်ဍတာဝနျယူမှုရှိရေး အထောကျအကူပွုဌာန (Myanmar Centre for Responsible Business)၊ ဖှံ့ဖွိုးမှုအတှကျ ‘မွနျ’ အိုငျစီတီအဖှဲ့ (MIDO) နှငျ့ ဖနျတီးရာ (Phandeeyar) တို့သညျ ယခု သုံးနှဈတာကာလတှငျ မွနျမာဒီဂဈြတယျအခှငျ့အရေးဖိုရမျ (၃) ခုအား ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ ၂၀၁၈ ခုနှဈ နှငျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈတှငျ အသီးသီး ကငျြးပခဲ့ကွသညျ။ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား၊ အစိုးရအရာရှိမြားနှငျ့ အရပျဖကျလူမှုအဖှဲ့အစညျးမြားက မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ လူ့အခှငျ့အရေးမြားကို ကာကှယျခွငျး၊ လေးစားလိုကျနာခွငျးနှငျ့ အကြိုးခံစားခွငျးဖွငျ့ မညျသို့မညျပုံ ‘စတုတ်ထအကွိမျမွောကျ စကျမှုတျောလှနျရေး’ သို့ အရောကျလှမျးနိုငျမညျ့ နညျးလမျးမြားကို ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
သုံးနှဈတာဖိုရမျတှငျ တကျရောကျဆှေးနှေးခဲ့ကွသူမြား (ကုလသမဂ်ဂအပါအဝငျ နိုငျငံတကာက ပါဝငျဆှေးနှေးခဲ့ကွသူမြား)က အငျတာနကျကို တဈကမ်ဘာလုံး ရယူသုံးစှဲနိုငျခှငျ့ရှိရေးသညျ လူ့အခှငျ့အရေးမြား၏ အခွခေံပွယုဂျဖွဈကွောငျး အလေးပေးဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။ ထိုအတှကျကွောငျ့ ဇှနျလ ၂၄ ရကျတှငျ ကြှနျုပျတို့အဖှဲ့အစညျး (၄) ခုသညျ အခွား ပွညျတှငျးအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးကာ အငျတာနကျဖွတျတောကျမှုအပျေါတှငျ ပူးပေါငျးကွညောခကျြတဈရပျ အား အင်ျဂလိပျဘာသာနှငျ့ မွနျမာဘာသာတို့ဖွငျ့ ထုတျပွနျခဲ့ပွီး အငျတာနကျသုံးစှဲခွငျးကို ကနျ့သတျမှုမြားအား ပယျဖကျြခွငျးကို ခကျြခွငျး လုပျဆောငျရနျနှငျ့ နောငျအခါတှငျ မွနျမာနိုငျငံရှိ မညျသညျ့နရောတှငျမဆို ထိုသို့ ပိတျပငျကနျ့သတျမှုမြား မဖွဈပျေါစရေနျအတှကျ ဆကျသှယျရေးဥပဒအေား ပွနျလညျသုံးသပျ၊ ပွငျဆငျရနျ တောငျးဆိုခဲ့သညျ။
ပုဒျမ ၇၇ ကို အသုံးပွု၍ ထုတျပွနျခဲ့သညျ့ အစိုးရ အမိနျ့မှာ အစိုးရက ‘မတညျငွိမျသညျ့’ အခွအေနဟေု သတျမှတျခွငျးခံရသညျ့ နရော အခွအေနမြေားတှငျ ထပျမံအသုံးပွုနိုငျရနျ အစပြိုးလိုကျသကဲ့သို့ ဖွဈသှားသဖွငျ့ ကြှနျုပျတို့အနဖွေငျ့ စိုးရိမျလကျြရှိပါသညျ။ ယငျးသညျ လကျရှိပိတျပငျမှုတှငျ တိုကျရိုကျမ ခံစားရသညျ့ အငျတာနကျအသုံးပွုသူအားလုံးကပငျ စိုးရိမျသငျ့သော ကိစ်စတဈရပျဖွဈပါသညျ။
သငျ့အနဖွေငျ့ ကိုယျခငျြးစာသျောလညျး အငျတာနကျပိတျရနျ မဖွဈနိုငျပါကလညျး ဤလှုပျရှားမှုတှငျ ပါဝငျနိုငျသညျ့ အခကျြမြား
၂၄ နာရီကွာ အငျတာနကျပွတျတောကျပါက ကွုံရမညျ့ ဆိုးကြိုးသညျ သငျ၏ ကုမ်ပဏီ၊ အသကျ မှေးဝမျးကြောငျးမှု၊ လုံခွုံမှုနှငျ့ ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးမြားကို ကွီးမားသော သကျရောကျမှုရှိနိုငျသဖွငျ့ အငျတာနကျပိတျရနျ မဖွဈနိုငျသျောလညျး သငျအနဖွေငျ့ ဤလှုပျရှားမှုတှငျ ပါဝငျနိုငျပါသညျ။
၁။ အောကျတိုဘာ ၃ ရကျမတိုငျခငျတှငျ အဘယျကွောငျ့ အငျတာနကျအား နစေ့ဉျသုံးစှဲနိုငျရေးသညျ သငျ့အတှကျ အရေးပါကွောငျးနှငျ့ အဘယျကွောငျ့ ယခုကဲ့သို့ အငျတာနကျဖွတျတောကျမှုဆိုငျရာ လှုပျရှားမှုတှငျ မပါဝငျနိုငျကွောငျးကို ရေးသား၍ mdrf@digitalrightsmm.info အား အီးမေးလျပို့ပေး ခွငျးဖွငျ့ ပါဝငျနိုငျပါသညျ။
ဤုလှုပျရှားမှုအား အငျတာနကျပိတျပငျမှုဆိုငျရာ ဆိုးကြိုးသကျရောကျမှုမြားကို ပိုမိုနားလညျလာနိုငျစရေနျ ရညျရှယျလုပျဆောငျရခွငျး ဖွဈပါသညျ။ ဤလှုပျရှားမှုက ထှကျပျေါလာသော ရလဈမြားကို အစိုးရနှငျ့ အခွားသကျဆိုငျရာတာဝနျရှိသူမြားအား လကျရှိကနျ့သတျမှုမြားကို ရပျတနျ့ရနျနှငျ့ နောငျအခါတှငျ နိုငျငံရှိ မညျသညျ့နရောတှငျ မဆို ထိုသို့ အငျတာနကျရရှိမှုကို ကနျ့သတျ၊ ဖွတျတောကျမှုမြား မလုပျဆောငျရနျ တိုကျတှနျးရာတှငျ အသုံးပွုသှားမညျဖွဈသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျမြားမှ ပွညျသူလူထု တဈသနျးကြျောအတှကျ အငျတာနကျ ပွနျလညျရရှိရေးကို အားပေးပါဝငျကွသော တဈဦးခငျြးစီအား လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ ကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
အင်တာနက်ရရှိရေးကို အလေးထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ဇွန်လ ၂၁ ရက်ကတည်းက အင်တာနက်ပိတ်ပင်မှုကို ကြုံတွေ့ခံစားနေကြရသော ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့ရှိ မြို့နယ် (၉) မြို့နယ်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသည့် လူဦးရေတစ်သန်းနှင့် တစ်ပေါင်း တစ်စည်းတည်း ညီညွတ်ကြောင်း ပြသမည့် အင်တာနက် ဖြတ်တောက်မှု ၁၀၁ ရက်မြောက်နေ့ (Day 101 Internet Blackout Day) လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ရန် အများပြည်သူအား ဖိတ်ခေါ်လိုသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ယခုအိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ရေးသား လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက လူထောင်ပေါင်းကို အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားခြင်းသည်မှာ လာမည့်စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ဆိုလျှင် ၁၀၁ ရက်မြောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သင် သတိထားမိရဲ့လား။ ဖုန်းအင်တာနက်မရှိပဲ သုံးလကျော် သင် ရှင်သန်နိုင်သလား။
ထိုကြောင့် မြန်မာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှူ ၁၀၁ ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်သည့် စက်တင်ဘာ (၃၀) ရက်နေ့တွင် မိတ်ဆွေတို့၏ ဖုန်းအင်တာနက်များ ပိတ်ပေးရန် ၊ ဆက်သွယ်မှူကွန်ရက်(ဝိုင်ဖိုင်)များ ပိတ်ပေးရန် ၊ရုံးများတွင် ဆက်သွယ်မှူဖြတ်တောက်ထားသည့်အကြောင်း အီးမေးလ်များအော်တို ပြန်ပေးရန်၊ နှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်များ ပိတ်ပေးပြီး၊ ယင်းအခြေအနေကြောင့် သင်တို့ မည်သို့မည်ပုံသက်ရောက်ခံစားရကြောင်း စမ်းကြည့်ပါဟု ကျွန်ုပ်တို့မှ အားလုံးကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
မြန်မာအင်တာနက် ဖြတ်တောက်မှူ ၁၀၁ ရက်မြောက်နေ့လှုပ်ရှားမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘာကြောင့် ပြုလုပ်ရပါ သလဲ။
ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အစိုးရက ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပါ ပုဒ်မ ၇၇ ကို ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိုဘိုင်းဖုန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် MPT၊ Mytel၊ Ooredoo နှင့် Telenor တို့အား အောက်ပါမြို့နယ်များတွင် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဖြတ်တောက်ရန် အမိန့်တစ်ရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အမိန့်အရ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့၊ ည ၁၀ နာရီမှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် (၈) မြို့နယ် (ပုဏ္ဍားကျွန်း၊ ရသေ့တောင်၊ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ မောင်းတော၊ ဘူးသီးတောင်) နှင့် ချင်းပြည်နယ်ရှိ ပလက်ဝမြို့နယ်များတွင် လူဦးရေတစ်သန်းကျော်သည် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု ဖြတ်တောက်ခံရမှုကို ကြုံတွေ့ခံစားနေကြရသည်။
သြဂုတ်လ ၃၁ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် အစိုးရက အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားခြင်း ခံရသော နယ်မြေများထဲမှ ၅မြို့နယ်ကို အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ပြန်လည်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော် နှင့် မင်းပြား စသည့် မြို့နယ် လေးခုတွင်မူ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရဆဲ ဖြစ်သည်။
အများပြည်သူတို့ သိရှိမည်ဖြစ်သည့်အတိုင်း အင်တာနက်သုံးစွဲမှုသည် မိုဘိုင်းဖုန်းများမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျေးလက်ဒေသများသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်မှာ မကြာမြင့်သေးသော်လည်း အင်တာနက်ကို ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးဖြစ်သော ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ စိုက်ပျိုးရေးအပါအဝင် စီးပွားရေးအမျိုးအစားအားလုံးနှင့် သတင်းအချက်အလက် မျှဝေမှုတို့အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုလာကြကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုသည် သာမန်အခြေအနေတွင်ပင် လူ့အခွင့်အရေးများဖြစ်သည့် လုံခြုံမှု၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ မိသားစုဘဝ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုခွင့်တို့ကို ကြီးမားစွာ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။
လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ ဒေသများဖြစ်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းတို့တွင် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ လုံခြုံရေးအတွက် လွန်စွာစိုးရိမ်ရဖွယ် ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေသခံပြည်သူများသည် လိုအပ်သည့် အကူအညီများ၊ အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် လူသားခြင်းစာနာသည့် အထောက်အပံ့များ ပို့ဆောင်နိုင်ရေးနှင့် စစ်ပြေးရှောင်နှင့် ရွှေ့ပြောင်းမိသားစုများအချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်မှုရရှိရေးအပြင် မြေပြင်အခြေအနေအား မျှဝေမှုတို့အတွက် အင်တာနက်ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန် လိုအပ်သည်။
အများပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိ၏ စိုးရိမ်မှုကို ပြသရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်နိုင်သနည်း။
သင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ မြို့နယ်(၉)ခုရှိ ပြည်သူလူထုအပေါ် စာနာကြောင်းနှင့် စည်းလုံးမှုရှိကြောင်း ပြသနိုင်ရန်အတွက် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အင်တာနက် ဖြတ်တောက်မှု ၁၀၁ ရက်မြောက်နေ့ (Day 101 Internet Blackout Day ) လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝန်ရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုလိုသည့်အချက်များမှာ-
ယနေ့နှင့် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ကြားတွင်
၁။ သင်၏ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် အင်တာနက်ကို မည်သို့အသုံးချကြောင်း လုပ်ငန်းခွင်ရှိ သင်၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ဆွေးနွေးမှုပြုပါ။
၂။ သင့်အနေဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း အင်တာနက်ကို တစ်ရက်တိတိ အသုံးမပြုပဲ နေနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ကို မန်နေဂျာများနှင့် ဆွေးနွေးပြီး သဘောတူညီချက် ရယူပေးပါ။
စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နှင့် ၂၆ ရက်နေ့များတွင်
၁။ သင်အနေဖြင့် အကယ်၍ အင်တာနက်ကို အသုံးမပြုဟု ဆုံးဖြတ်ထားပါက သင် အလုပ်ချိန် အတွင်း အဓိကဆက်သွယ်လေ့ရှိသူများကို ကြိုတင်အသိပေးထားမှသာ ၎င်းတို့အနေဖြင့် လိုအပ်ပါက ၎င်းတို့ သင့်အား ပေးပို့ဆက်သွယ်စရာရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မတိုင်မီ ပေးပို့ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၁။ အီးမေးလ်တွင် “အလိုအလျောက်ပြန်ဖြေပေးသည့် မက်ဆေ့ခ်ျ (auto-response)” ကို အောက်ဖော်ပြပါ စာပိုဒ်အား ကူးယူဖော်ပြပြီး စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့၊ အချိန်အားဖြင့် ဝဝးဝဝ နာရီမှ ၂၃း၅၉ နာရီ အတွင်း ထိုစာပိုဒ်ကို အလိုအလျောက် ပြန်ဖြေပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါ။
“စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကျွန်ုပ်သည် မြန်မာအစိုးရ၏ အမိန့်ကြေညာချက်များကြောင့် ရက်ပေါင်း (၁၀၁) ရက်မြောက်နေ့အထိ အင်တာနက်ရယူသုံးစွဲခွင့် မရရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့ရှိ လူဦးရေတစ်သန်းကျော်နှင့် စည်းလုံးမှုရှိကြောင်း ပြသလိုသဖြင့် မြန်မာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုနေ့ (Myanmar Internet Blackout Day ) လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှား နေပါသည်။
ဤလှုပ်ရှားမှု ကျွန်ုပ်သည် မိုဘိုင်းလ်အင်တာနက်နှင့် အင်တာနက်ကို ၂၄ နာရီတိတိ ပိတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ အရေးပေါ်လိုအပ်ပါက ဖုန်းဆက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျပို့ ၍သော်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်အား ဆက်သွယ်နိုင်သည်။”
၂။ သင်၏ Facebook ပရိုဖိုင်ပုံကို အင်တာနက် ဖြတ်တောက်မှု ၁၀၁ ရက်မြောက်နေ့ (101th Day of Myanmar Internet Blackout) ဆိုင်ရာ ပုံသို့ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ရုံးတံခါးအဝင်ဝတွင် ကပ်ထားခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးပါ။ (ပုံများကို ယခုလင့်ခ် တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။)
စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ မနက် ဝဝးဝဝ နာရီ (သို့မဟုတ် မတိုင်ခင်ညတွင်)
၃။ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့၊ အချိန်အားဖြင့် ဝဝးဝဝ နာရီမှ ၂၃း၅၉ နာရီ အတွင်း - အင်တာနက် ပိတ်ရန်
(ခ) လုပ်ငန်းအင်တာနက်/ wifi တို့ကို ၂၄ နာရီတိတိ ပိတ်ထားပေးပါ။
၄။ ထိုသို့ အင်တာနက် အသုံးမပြုပဲ နေလိုက်ရခြင်းသည် သင်၏ တစ်နေ့တာကို မည်သို့သက်ရောက် မှုရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားပေးပါ။
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၃ ရက်အတွင်း
၁။ ၂၄ နာရီကြာ အင်တာနက်မရှိဘဲ လုပ်ကိုင်နေထိုင်ရသည့်အတွက် ကြုံတွေ့ရသည့် အတွေ့အကြုံအား mdrf@digitalrightsmm.info ကိုအီးမေးပေးပို့ပေးပါ။ အင်တာနက် မရှိသည့်အတွက် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အခြားဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြင် စီးပွားရေးတန်ဖိုးများကို လည်း သက်ဆိုင်မှုရှိပါက ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါ)။ ထို့အပြင် လူကြီးမင်းမှ ပေးပို့သည့် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အများပြည်သူသို့ ထုတ်ဖော်တင်ပြနိုင်ခွင့် ရှိ၊ မရှိ နှင့် သင်၏ အမည်နာမကို သုံးစွဲနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဖော်ပြပေးပါ။
ပုဒ်မ ၇၇ တွင် ‘ယာယီ’ ဆိုင်းငံ့ခြင်းဟု ဆိုသော်လည်း ဇွန်လ (၂၀) ရက်နေ့က မိုဖိုင်းဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီများအား ပေးပို့သော အမိန့်သည် အကန့်အသတ်မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ထို့အပြင် ယင်းသို့ ပိတ်ပင်မှုအတွက် အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းပြချက်များကိုလည်း မရှင်းလင်းထားသည့်အပြင် မည်သည့်အချိန်တွင် ရုတ်သိမ်းမည်ကို ဖော်ပြခြင်းမရှိပဲ ယနေ့အချိန်ထိ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုမှာ (၂) လကျော် ကြာမြင့်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုကို ကြုံတွေ့ခံစားနေကြရသော မြို့နယ် (၉) မြို့နယ်ရှိ ပြည်သူလူထုများနှင့် ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုသည် ၎င်းတို့နေစဉ်ဘဝအား သက်ရောက်နေသည့် အချက်များကို အစိုးရက သတိပြုမိနိုင်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ ဥပမာ - နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ဆွေမျိုးသားချင်းများက မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲပြောင်းမှုများ ပိတ်ပင်ခံထားရခြင်း၊ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်သည်များအနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ရန် ခက်ခဲသွားခြင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပညာရေးရှာမှီးနေသူတို့အတွက် သတင်းအချက် အလက်များ ပိတ်ပင်ခံရခြင်း စသည့် ဆိုးကျိုးများကို ကြုံတွေ့ခံစားနေရသည်။ e-government အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုအများစုသည် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လုပ်ကိုင်နေကြသဖြင့် အင်တာ နက်ဖြတ်တောက်ခံထားရသော ပြည်သူလူထုအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံသလိုဖြစ်နေသည့်အပြင် မညီမျှမှုကို ပို၍ပင်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် လွတ်လပ်သောထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမြန်မာ (Free Expression Myanmar)၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန (Myanmar Centre for Responsible Business)၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ‘မြန်’ အိုင်စီတီအဖွဲ့ (MIDO) နှင့် ဖန်တီးရာ (Phandeeyar) တို့သည် ယခု သုံးနှစ်တာကာလတွင် မြန်မာဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဖိုရမ် (၃) ခုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အသီးသီး ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရအရာရှိများနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ခြင်း၊ လေးစားလိုက်နာခြင်းနှင့် အကျိုးခံစားခြင်းဖြင့် မည်သို့မည်ပုံ ‘စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် စက်မှုတော်လှန်ရေး’ သို့ အရောက်လှမ်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
သုံးနှစ်တာဖိုရမ်တွင် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသူများ (ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာက ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသူများ)က အင်တာနက်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံး ရယူသုံးစွဲနိုင်ခွင့်ရှိရေးသည် လူ့အခွင့်အရေးများ၏ အခြေခံပြယုဂ်ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် ဇွန်လ ၂၄ ရက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း (၄) ခုသည် အခြား ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုအပေါ်တွင် ပူးပေါင်းကြေညာချက်တစ်ရပ် အား အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် မြန်မာဘာသာတို့ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အင်တာနက်သုံးစွဲခြင်းကို ကန့်သတ်မှုများအား ပယ်ဖျက်ခြင်းကို ချက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် နောင်အခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ထိုသို့ ပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအား ပြန်လည်သုံးသပ်၊ ပြင်ဆင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ပုဒ်မ ၇၇ ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အစိုးရ အမိန့်မှာ အစိုးရက ‘မတည်ငြိမ်သည့်’ အခြေအနေဟု သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည့် နေရာ အခြေအနေများတွင် ထပ်မံအသုံးပြုနိုင်ရန် အစပျိုးလိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်သွားသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် စိုးရိမ်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းသည် လက်ရှိပိတ်ပင်မှုတွင် တိုက်ရိုက်မ ခံစားရသည့် အင်တာနက်အသုံးပြုသူအားလုံးကပင် စိုးရိမ်သင့်သော ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်ချင်းစာသော်လည်း အင်တာနက်ပိတ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါကလည်း ဤလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်နိုင်သည့် အချက်များ
၂၄ နာရီကြာ အင်တာနက်ပြတ်တောက်ပါက ကြုံရမည့် ဆိုးကျိုးသည် သင်၏ ကုမ္ပဏီ၊ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ လုံခြုံမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ကြီးမားသော သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သဖြင့် အင်တာနက်ပိတ်ရန် မဖြစ်နိုင်သော်လည်း သင်အနေဖြင့် ဤလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၁။ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်မတိုင်ခင်တွင် အဘယ်ကြောင့် အင်တာနက်အား နေ့စဉ်သုံးစွဲနိုင်ရေးသည် သင့်အတွက် အရေးပါကြောင်းနှင့် အဘယ်ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွင် မပါဝင်နိုင်ကြောင်းကို ရေးသား၍ mdrf@digitalrightsmm.info အား အီးမေးလ်ပို့ပေး ခြင်းဖြင့် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ဤုလှုပ်ရှားမှုအား အင်တာနက်ပိတ်ပင်မှုဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ပိုမိုနားလည်လာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုက ထွက်ပေါ်လာသော ရလစ်များကို အစိုးရနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအား လက်ရှိကန့်သတ်မှုများကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် နောင်အခါတွင် နိုင်ငံရှိ မည်သည့်နေရာတွင် မဆို ထိုသို့ အင်တာနက်ရရှိမှုကို ကန့်သတ်၊ ဖြတ်တောက်မှုများ မလုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းရာတွင် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်များမှ ပြည်သူလူထု တစ်သန်းကျော်အတွက် အင်တာနက် ပြန်လည်ရရှိရေးကို အားပေးပါဝင်ကြသော တစ်ဦးချင်းစီအား လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Our analysis (with Freedom House) of digital rights in Myanmar >
Tagged with: Conflict, Digital rights, National security အမြိုးသားလုံခွုံရေး, Telecommunications Law ဆကျသှယျရေးပုဒျမ